Diyaaradaha Israil oo duqeeyey xarun ku taala dalka Siiriya. |
Diyaaradaha Israil oo duqeeyey xarun ku taala dalka Siiriya.
Warbaahinta Israel ayaa sheegtey in dayaaradahoodu bartilmaameed ka dhigteen xarun hoostagta Bashar Assad oo ka shaqeysa hubka Kiimakiada ah (chemical weapons programme).
Xukuumadda Israel ayaa diidey in ay ka jawaabto su’aalo laga weydiiyey weerarka diyaaradahoodu qaadeen habeenkii xalay.
Dalka Lubnaan ayaa sheegay in diyaaradaha Israel ay kux adgudbeen habeenkii xalay hawadooda, dhanka ay Xamaa ka duqeeyeena ay ka soo galeen dhanka Lubnaan.
Qaar kamid ah Mucaaradka Siiriya ayaa sheegaya in diyaaradaha weerarkan fuliyey ay ahaayeen ilaa afar diyaaradood, waxaana weerarka ku geeriyoodey ilaa hadda laba qof.